Google Search njikwa Goofed ma Zigara Alerts ongha na WordPress | Martech Zone
Google Search njikwa Goofed ma Zigara Alerts ongha na WordPress
Sọnde, Febụwarị 12, 2017 Mọnde, Febụwarị 13, 2017 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ, m na-esi isi m ebe Google nọ na ya njikwa njikwa. Ọ bụ ezie na ekwenyere m na ọ bụ ọrụ dị ịtụnanya iji chọpụta malware na saịtị ma gbochie saịtị ndị ahụ ka edepụtara ha na nsonaazụ ọchụchọ, echeghị m na m chọrọ Google na-enyocha saịtị na-achọ nsogbu.
Isi okwu bụ oge na-adịghị anya nke gbadara m na, ana m eche, ọtụtụ iri puku saịtị ndị kwuru na ha na-agba ụdị nke WordPress nke na-enweghị nchebe. Nsogbu ahụ? Ọ bụ ụgha dị mma na imirikiti saịtị ndị ahụ na-agba ọsọ kachasị ọhụrụ nke WordPress. Agbanyeghị na amachaghị m usoro Google jiri iji kwado saịtị ahụ, ọ dị ka ịchebe chịa nwere ike ịbụ nsogbu. Ebe ọ bụ na peeji ndị echekwara na-adịkarị na ntanetị na saịtị WordPress, ọ kpatara ọgba aghara.
N'ezie, nsogbu bụ na ọtụtụ n'ime ndị natara email ndị ahụ bụ ndị ahịa na-akwụ ụgwọ maka nnabata na nchekwa dị elu, ma nwee ụlọ ọrụ, dị ka ibu, Na-arụ ọrụ iji hụ na ndị ahịa anyị nwere nchebe. Mgbe ha natara email dị ka nke ahụ, ọ na-ebute ọgba aghara. Obi dị m ụtọ, Google zara ozugbo forums webmaster ha na ha, n'ezie, kpatara nsogbu ahụ.
Ndewo ha niile - n'aha ndị otu na-agba mbọ a, biko nabata mgbaghara anyị maka ọgba aghara anyị mepụtara. Anyị maara ikpe ebe anyị zigaara ndị nwe WordPress ozi nke emegoro na nke na-adịbeghị anya site na njedebe ikpeazụ anyị - anyị chere na a ga-enwe ọtụtụ ikpe ndị a tupu anyị agbasi mbọ ike izi ozi. Juan Felipe Rincón, Google
The mea culpa enwere ekele, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị ka ihe ịtụnanya na Google ga-ebupụta ihe dị ka nke a n'onwe ha. Ugboro ole na ole mgbe emechara mkparịta ụka ahụ, onye njikwa ngwaahịa nchekwa WordPress jikọtara ya na ndị otu Google wee kwuo na ọ ga-amasị ha ịrụ ọrụ ọnụ na nke a. Amaghị m ihe kpatara nke ahụ emeghị nke mbụ, mana daalụ ịdị mma ọ na-aga n'ụzọ ahụ.
Ọ bụ ezie na enweghị m obi abụọ na Google nwere akụrụngwa iji mezuo ụdị ọrụ a, echeghị m na m nwere ekele maka ebe ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu. Enwere m mmasị na Google na-enye ngwaọrụ dịka Search Console, Analytics, Tag Manager, na ndị ọzọ iji nyere anyị aka melite otu ndị ọrụ si emekọrịta na saịtị anyị. Mana mgbe ha gafere akara ahụ - dịka ọ dị na nke a yana AMP, SSL, Mobile, na atụmatụ ndị ọzọ, ọ dị ka ha na-abanye ụkwụ anyị ọzọ.
Recommendationsme ndụmọdụ dị mma, na ịnye ngwaọrụ iji nye ndụmọdụ ndị ahụ ka mma. Mana mgbe Google malitere ịdọ aka na ntị ma ọ bụ ọbụlagodi ịtinye saịtị na-anaghị akpa agwa dịka Google chọrọ ka ha dị, ọ ga-enye m nnukwu nsogbu.
Tags: google search njikwagoogle webmastersJuan Felipe RincónWordPressnchekwa nchekwa
Akwụkwọ ozi ghere oghe nye @Jack About Twitter
Feb 13, 2017 n’elekere 9:59 nke abali
Google dị ka Ngalaba Mmụta. Ọ bụrụ na ụlọ akwụkwọ chọrọ dollar gọọmentị, ha ga-agbaso ụkpụrụ akọwapụtara nke nwere ike ọ gaghị adabara ọdịmma obodo ha. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ uru dị n’igosi na nsonaazụ ọchụchọ ị ga-agbaso iwu Google ọbụlagodi na ọ dabaghị na ọdịmma gị. Echere m na ntụgharị nke engines ọchụchọ bụ ihe dị mkpa nke mere na anyị enweghị otu nnukwu ụlọ ọrụ na-emegbu ndị mmadụ ka ha doo onwe ha n'okpuru. Google na-eme ọtụtụ ihe dị ukwuu nke na-erite uru na mpaghara ọgbara ọhụrụ mana ha na-eme ihe dịịrị ha mma mgbe niile.
Feb 17, 2017 n’elekere 8:53 nke abali
Amaghị m… Enwetara m ọkwa ahụ ka ụfọdụ ndị ahịa m mere. Echeghị m na ọ bụ esemokwu. Ọ bụrụ na ọ mere ugboro ugboro, m ga-enwekwu nchegbu. Ana m enye ha ikike maka nke a.
Feb 17, 2017 n’elekere 9:07 nke abali
Ikekwe ị nwere ndị ahịa ka mma?